Kusvirwa naBamudiki Sweetman – Vanoda Zvinhu
· Updated October 15, 2013
Ndakafumogeza kuseni seni ndokunobata bhazi raMayambara raipfuura nepamusha pedu kuma7 richibva paShurugwi chaipo. Handina zvizhinji zvandafunga kunze kwekuti dai zvinhu zvanondifambirawo kuHarare mari dzepenjeni yababa Ronia yabuda. Kubva zvavakarohwa nemotokari vari pamudhudhudhu vari pabasa vachibva vangofira ipapo, hapana kana sendi repenjeni randange ndambopiwa. Ndaive ndatopedza gore rese ndichizvifambira. Pandakapedzisera kuendako muna juni vakange vati ndozodzoka musi wa24 Novhemba zvinenge zvanaka. Mukudoka kwaro zuva ndainge ndatosvika zvangu muHarare.
Ndakabva ndananga kuBudiriro kwaigara babamudiki Sweetman,munun’ina wababa Ronie Ndakasvikotambirwa naChenai, kasikana kavo kaive nemakore gumi ako ndakaona kachitamba muroad. Tapinda mumba ndakawana dangwe ravo Lion achangoisa poto yemuriwo pamoto. Babamudiki Sweetman vakange vakatogara zvavo vachiona TV. Vakataridza kufara vachindiona. Takwazisana paya ndakazobvunza kuti mainini mai Lion vaive vaindepi. Ndakaudzwa kuti vaive vave nesvondo vakaenda kuSouth. Ipapo ndakatarisa babamudiki Sweetman ndikaona vakanditi ndee mumaziso chaimo. Neniwo ndakabva ndanyemwerera. Mainini vaive vasipo…hela….nhasi inotorara irimo chete!! Maihwee maihwee zvangu. Ini nababa mudiki Sweetman taive tiine unfinished dzedu.
Rimwe zuva mukoma wavo achiri mupenyu vauya kumusha takasanganidzana panzira kuchangosviba ini ndichibva kutsime. Babamudiki Sweetman vakabva vanditi mbaaa garo rangu ndokunditi ‘Asi maiguruka….tichasangana’.
Hatinazve zvakazoitika pakati pedu. Saka nhasi ndiro raive zuva racho matako aisangana pakuyambuka. Ndakaona shasha yonyemwerera nekutambisa kagumbo nekuti aiziva zvandaifunga ndikati nechemumoyo ‘wamama mufana’. Munoziva zvinoita munhu kana uine shave rekuda mboro. Muviri wako unotanga kuita temperature uyu. Beche rako rinenge roita kuvhita kunge chironda ndikuudzei zvenyu. Ipapo ndakabva ndatotanga kumiramira, icho chimina ndatomisa mudenga kunge igo. Ndakabva ndati Lion aregedze kubika ini ndokukanga poto. Sandi kunhuwirira ikoko. Ndaive ndofeshererwa mboroka yandaiziva kuti husiku inenge yanyura, nyoro chaiyo futi. Ava babamudiki Sweetman ndaiti ndikangoisa ziso rangu kwavari wanike oruma miromo nekupurudzira tundebvu. Maziso ake aindiudza kuti ‘nhasi maiguru ndinokusvirai mukaita dhodhi mirari muone!’. Tapedza kudya ndakabva ndamira pasink ndogeza mapureti. Babamudiki Sweetman vakauya ndokuti nekazevezeve
‘Morara naChenai muDining room umu, kana arara muzouya kubedroom door rinenge rakavhura’.Vapedza kudaro vakadaidzira kuti munhu wese anzwe. Ave mangwana maiguru. Isu vekumabasa toda kukasira kurara’. Ini ndakapindura nekazwi katetetete ndoti’zvakanakai babamudiki, morara zvakanaka’. Ndichangopedza kugeza mapureti ndakaisa mvura mubvavhu ndogeza kuitira kubvisa kunhuwavkwechiutsi kuya nedikita remubhazi. Chenai akandipa lotion yamai vake ndobva ndazorazora zvangu paye. Ndakazoti wee chuma changu chemuchiuno chiya chandaive ndambopfekera sabhukukumusha. Ndaive ndagochitakurawo nhai. Asika ukaona ndabudisa chuma ichocho ziva kuti siyafiwa pabonde apa. Zvinemashaika zvekado izvi. Mukuzonopedza kugeza ndaive ndatokuvara zvangu kare nezemu. Matinji aive aita kuzvimba aya, nyatso dzanga dzachiti twii kumira neiko kuvavirira. Amai! Ndini uyo ndamirira kuti Chenai akotsire Pandakangoziva kuti arara, ndakati yaa, nguva yekunosviirwa yakwana. Nebhurugwa ndainge ndisinabkuzombopfeka pandakapedzabkugeza paye. Ndakati waranyu magumbeze zvesina ruzha. Ndakanyahwaira ndonanga kubedroom ndikasvikowana door rakavhurwa zvishoma. Ndakapinda mudima imomo ndokutsvanzvadzira ndakananga pamubhedha. Wanika hapana munhu.
Ndakati cheu ndokuona babamudiki Sweetman vakamira kuseri kwedoor.
‘Maiguru ndanguri ndamira mhani amaiguru….asi maiguruka, mandikuvadzabmhani. Ndanzwa neze….’
Haana kuzopedzisa zvaaida kutaura ini ndaive ndatovemumaoko ake kare totsvodana paya.Babamudiki Sweetman aive mutswi zvake,asina chaakapfeka.. Ndakativndichinobata muzvambarara wemboro yake kudai wanike iri kuchema tumisodzi tuya twuniotanga kubuda kana murume anzwira nekuda beche. Mboro yaiita kuvhita kudai.
Ndakati ‘Munoluma here babamudiki’ iye ndokuti ‘Maiguru ndinoluma..regai muone nhasi ndinokuchemedzai maiguru, beche ndicharova maiguru’. Nechemumoyo ndakati
‘Tichaona kuti achachema ndiyani musatanyoko’.
Mukutsodana kudaro babamudki vakanosveverera zvigunwe zvaka pamatinji angu kudai ndakabva ndatanga kuimbirira…mai, maikani, mai maikani. Ipapo ndaive ndotota mheche yese iyi. Akati zvigumwe zviviri ndooo mukati mebeche, iweka iwe! Akatanga kundikwesha nazvo zvigumwe. Ndainge ndongotambirira nekukoira iye achiti akapinza obudisa, akapinza obudisa,akapinzaaaaa….Jerusarema kani. Mutundo wekutanga, ndakabva ndatongotundiswa nezvigumwe chete. Akazozvibudisa mubeche zvati nyakata kutota kani iwe kuita kunge akangebanyika mujuice chaiyo. Akachitanga kuyamwa mazamu angu kungekacheche kanonokerwa nemukaka. Akaita zekuasveta chaiko. Zvadaro rume rakange rofemera mudengawovkunge munhu ane asima uya. Akandisundudzira pamudhedha zvine simba, zvino mboro iya yoita kunge mhungu yashatirwa.
Kuzondidaro. Haikona kudaro munhu ane shave remboro mhani! Ndakabva ndarivhura gumbo zvino kuti achinyatsopinda. Akauya pamusoro pangu ndokuti ‘Vhurai maiguru ndoda kupinda. Asi maiguruka nhasi muchazviona’
Ipapo ainge abata mazigaro angu nemaoko ese kudai achinyatsovhura makumbo. Ndakabata mboro yake ndokuiti zvishoma pamuromo webeche apa ndokubva ndaibudisa….oi oi oiiiiiii. Mai kani. Ndakati ndazvidenhera..
‘Maiguru isa kani, isa kani maiguru….mai kani’
Ndakainyudza mubeche ndokanyatsonzwa ichidzika kusvika kugodo uku. Right akachitanga kukoira zvino babamudiki Sweetman uye. Akaiti akati > koikoi omira koikoi omira achikoka simba. Ini zvino mhata ndaive ndamisa mudenga ndichirova chikapa chaicho. Taisvikosangana apa, iye achikoira ini ndichi kurungira ndiri muzasi. Dikita manje amai. Taive toerera murwizi Save chaimo nedikita. Beche rakakweshwa paye. Pandakazoti kwirirei zvishomabkuitira kuti mboro inyatsopinda ndopandakanzwa mhere murume obowa semombe
‘Mai Ronie kani, mai Ronie iwe, mai Ro……amai!!!!!’
Akadaro achitunda kuti chaaaaaa. Ndakabva ndanzwa kupisa kwehurume hwake iniwo ndichibva ndatongotundawo. Paye tangosara tati rapata……Sabhuku kumusha uku ungazomuziva futi?
Hahahahahah Baba Mudiki Sweetman vanonaka amana.
Next story Kusvira mukadzi waBoss. Dont try this at your workplace
Previous story Poverty paHarare, ndodii?